Maninona ny mpikaroka afrikanina no tokony hiditra ao amin'ny Psychological Science Accelerator - AfricaArXiv
Nahoana ny mpikaroka afrikanina no tokony hiditra ao amin'ny Psychology Science Accelerator
navoakan'ny Adeyemi Adetula & Patrick S. Forscher on March 13 March 2020 March 13 March 2020
Ny tanjon'ny AfricaArXiv dia misy ny fampiroboroboana ny fiaraha-monina eo amin'ireo mpikaroka afrikanina, hanamora ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpikaroka afrikanina sy tsy Afrikana ary hampiakatra ny mombamomba ny fikarohana afrikana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ireo tanjona ireo dia mifanaraka amin'ny tanjon'ny fikambanana hafa, ny Accelerator ny siansa psikolojika (PSA). Ity lahatsoratra ity dia mamaritra ny fomba mampifanaraka ireo tanjona ireo ary miady hevitra fa ny fidirana ny Psychology Science Accelerator dia hahazo tombony amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-pikarohana AfricaArXiv amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fiaraha-miasa sy ny fidirana amin'ny loharanon-karena.
Inona no atao hoe Accelerator ny siansa psikolojika?
Ny PSA dia tambazotra an-tsitrapo, mizara maneran-tany, demokrasia maherin'ny 500 laboratoara avy amin'ny firenena 70 mahery any amin'ny kontinanta enina feno mponina, anisan'izany i Afrika. Ny fandalinana psikolojika dia nentim-paharazan'ny mpikaroka tandrefana nianatra ny mpandray anjara tandrefana (Rad, Martingano, & Ginges, 2018). Ny iray amin'ireo tanjona voalohany amin'ny PSA dia ny fanampiana amin'ny famahana ity olana ity amin'ny fanitarana ny isan'ireo mpikaroka sy mpandray anjara amin'ny fikarohana ara-tsaina, ka mahatonga ny psikolojia ho solontenan'ny zanak'olombelona.
Ity tanjona ity dia mifanaraka amin'ny tanjon'ny AfricaArXiv: ny famahana ny tsy fisian'ny mpikaroka ara-psikolojia tandrefana dia mitaky ny fampakarana ny mombamomba ireo mpikaroka psikolojia Afrikanina ary mamelona fiaraha-miasa eo amin'ireo mpikaroka afrikanina sy tsy Afrikana. Ankoatr'izay, ny PSA manokana dia manana tombony hanitatra ny tamba-jotra any Afrika: na dia te hahita ny fisolo tena ny kontinanta rehetra aza ny PSA, raha ny farany ihany no 1% amin'ireo laboratoara 500 dia avy any Afrika.
Ny fomba azon'ny PSA mahasoa ny vondrom-pikarohana afrikanina
Ny tanjona iraisan'ny PSA sy AfricaArXiv dia noho izany dia ny handresy / fandraisana mpiasa vondrona mpikaroka afrikanina mba hanatevin-daharana ny PSA sy ny programa misy eo amin'ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny fiantohana ara-pinoana. Izahay dia manolo-tena hanitatra ny mombamomba ireo mpikambana ao amin'ny vondrona mpikaroka Afrikanina.
Izay mpikaroka momba ny psikolojia dia afaka miditra ao amin'ny PSA tsy misy vidiny. Ireo labs mpikambana dia hanana fotoana handraisana anjara amin'ny fitantanana PSA, mametraka fandalinana hitarika amin'ny alàlan'ny tamba-jotra PSA, ary hiara-hiasa ary hahazo mpanoratra amin'ny tetikasa misy mpikaroka an-jatony avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny tetikasa PSA dia maro be; ny fampianarana manerantany voalohany mandeha amin'ny tambajotra (Jones et al., 2020) nahitana labatra mihoatra ny 100 avy amin'ny firenena 41, izay naharay mpandray anjara maherin'ny 11,000.
Ny PSA dia miteraka tambajotram-pikarohana be dia be, izay mety hisy nizara tsy nisy vidiny amin'ny alàlan'ny AfricaArXiv. Ny angon-drakitra PSA izay misy mpandray anjara afrikanina dia misy maimaimpoana amin'ny famakafakana faharoa. Ireo datasety ireo dia azo zahana miaraka amin'ny fifantohana afrikana manokana, ary ny fikarohana vokatr'izany dia azo zaraina malalaka amin'ny alàlan'ny AfricaArXiv.
Ny tombontsoa manokana amin'ny fidiran'ny PSA
Ny dingana voalohany ahazoana ny tombontsoa amin'ny PSA dia lasa mpikambana amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena amin'ny firaisankina mba handray anjara amin'ny PSA amin'ny fomba iray na hafa. Mampiasa vola maimaim-poana.
Rehefa mpikambana ianao dia mahazo miditra amin'ireo soa dimy manaraka ireto:
Fandefasana maimaimpoana amin'ny tolo-kevitra hametrahana tetikasa marobe sy nasionaly. Manaiky ny tolo-kevitra ho an'ny fanadihadiana vaovao ny PSA hitety ny tambajotran'izy ireo isan-taona eo anelanelan'ny Jona sy Aogositra (azonao jerena ny fiantsoanay 2019 Eto). Azonao atao koa ny mametraka tolo-kevitra. Raha ekena ny volanao amin'ny alàlan'ny fizotran'ny famerenan'ny namantsika, dia hanampy anao handray ireo mpiara-miasa amin'ny tamba-jotra iraisam-pirenena amin'ny labs 500 ny soso-kevitrao ary hanome fanampiana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanatanterahana fanadihadiana marobe. Afaka manao izany ianao manaiky misy vokatra fikarohana izay vokatr'ity dingana ity maimaim-poana ho famporisihana amin'ny AfricaArXiv.
Midira hiatrika ireo tetikasa PSA. Ny PSA dia mandeha amina tetik'asa marobe miisa, iray amin'ireo dia mandray mpiasa mavitrika. Mandritra ny roa herinandro ho avy, hanaiky onjam-pianarana vaovao ny PSA. Amin'ny maha mpiara-miasa amin'ny iray amin'ireo fianarantsika, dia afaka manangona data na manampy amin'ny fandalinana statistika, fitantanana tetikasa, na fitantanana data ianao. Raha miara-miasa amin'ny tetikasa ho mpiara-miasa ianao dia hahazo mpanoratra amin'ny taratasy izay azo avy amin'ny tetikasa (izay mety ho nozaraina malalaka amin'ny alàlan'ny AfricaArXiv). Azonao atao ny mamaky momba ny fandalinana izay asehon'ny PSA amin'izao fotoana izao Eto.
Midira ao amin'ny birao mpanatontosa ny PSA. Ny PSA dia mandefa fiantsoana fandalinana vaovao isaky ny roa taona. Sahala amin'ireo masoivoho manome sy ny diary, dia mila ny olona manompo ho toy ny mandinika momba ireo fandalinana fianarana ireo. Azonao atao ny manondro fahalianana amin'ny maha-mpamerin-dresaka anao rehefa lasa mpikambana ao amin'ny PSA ianao. Raha hiverenana dia ho mpikambana ao amin'ny birao mpanatontosa PSA ianao. Azonao atao ny mampiditra ny isan'ny mpikambana ao amin'ny birao mpanonta ao amin'ny tranonkalanao sy ny CV.
Midira amin'ny komity mpitantana ny PSA. Ny politika sy ny fomba fanaon'ny PSA dia mivoatra amin'ny karazany isan-karazany komity. Misesy foana ny fotoana handraisana ireo komity ireo. Ny fanompoana ny komity dia manampy amin'ny famolavolana ny làlan'ny PSA ary mampifandray ireo mpikaroka amin'ny mety ho mpiara-miasa rehetra manerana izao tontolo izao. Raha liana amin'ny fidirana komity ianao dia midira ao amin'ny Gazety PSA ary ny Sehatra fiasana PSA Slack. Izahay dia manao fampahafantarana vaovao afaka hanatevin-daharana ny vaomiera ao anatin'ireny fizarana ireny.
Mahazo tambin-karena ho sandoka ny vidin'ny fiaraha-miasa. Tsapanay fa ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena dia mety ho sarotra ary lafo, indrindra ho an'ireo mpikaroka ao amin'ny sampam-bola ambany. Manome loharano ara-bola ny PSA hanamora ny fiaraha-miasa. Amin'izao fotoana izao dia manana dobo kely iray isika grants mpikambana, famatsiam-bola kely mitentina $ 400 USD hanampiana ny vidin'ny fandraisana anjara amin'ny tetik'asa fikarohana PSA. Azonao atao ny mangataka ny fanomezana ny lab labera Eto.
Ny PSA dia mikendry ny hampiroborobo ny fiaraha-miasa amin'ny tetik'asa lehibe sy hazakazaka ary maro be. Mino izahay fa ireo fiaraha-miasa ireo dia afaka manome tombony betsaka amin'ny mpikaroka Afrikana. Raha manaiky ianao dia afaka hiaraha-miasa amin'ny tambajotranay hahazoana miditra amin'ny vondron'olona mavitrika sy iraisam-pirenena amin'ireo mpikaroka 750 mihoatra ny laboratoara 548 any amin'ny firenena 70 mahery. Manantena ny fiarahanao miasa aminao izahay.
Momba ireo mpanoratra
Avy any Nizeria, Adeyemi Adetula dia mpianatra PhD miaraka amin'ilay Lab-CO ao amin'ny Université Grenoble Alpes ary mpikambana ao amin'ny Accelerator ny siansa psikolojika. Ade dia mandalina raha mahita ny fahitana amin'ny ankapobeny ny tsikombakomba ara-tsaina, indrindra amin'ireo firenena Afrikanina. Ny tombotsoan'ny fikarohana nataony dia ny famerenana ny toe-tsaina, ny toe-tsaina sy fanandramana, ny toe-tsaina ara-kolontsaina, ny fepetra momba ny toe-tsaina amin'ny toe-tsaina sy ny psikolojika momba ny forensika sy ny fanitsiana. Afaka manatratra azy any amin'ny adeyemiadetula1@gmail.com
Patrick S. Forscher dia mpahay siansa fikarohana miaraka amin'ny Lab-CO ao amin'ny Université Grenoble Alpes mandinika ny fomba hitazomana ireo fiaraha-miasa lehibe amin'ny psikolojia. Izy koa no talen'ny Mpanampy ho an'ny data ao amin'ny Akademia ara-psikolojika. I Patrick no tompon'andraikitra amin'ny hetsika marobe amin'ny PSA, ao anatin'izany ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny politika PSA sy ny fandaharan'asa famatsiam-bola. Ny tombotsoany amin'ny fikarohana dia misy ny fikarohana ampiharina, ny fanandramana amin'ny sehatra, ny famakafakana ny meta, ny fandinihana ny mpiara-miasa ary ny trosa fikarohana. Afaka manatratra azy any amin'ny schnarrd@gmail.com
Sokajy:	fiaraha-miasaOpen AccessPeer ReviewFifandraisana ara-tsiansaSubmission
Tags: mpanao gazetyAccelerator ny siansa psikolojika